विश्वमै पहिलोपल्ट मान्छेको मुटु प्रत्यारोपण भएको त्यो दिन... :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
बुधबार, असार १५, २०७९Wed, Jun 29, 2022
विश्व मुटु दिवस विश्वमै पहिलोपल्ट मान्छेको मुटु प्रत्यारोपण भएको त्यो दिन...
स्वास्थ्यखबर बुधबार, असोज १३, २०७८, ०८:३३:००
केपटाउन– तीन डिसेम्बर १९६७ को बिहान दक्षिण अफ्रिकाका लागि एक सामान्य बिहान थियो। तर, केपटाउनको ग्रुट शुर अस्पतालको अप्रेशन थिएटर टू ए मा इतिहास रचिदै थियो।
बिहान ६ बजेतिर प्रोफेसर क्रिस्टियन निथलिंग बर्नार्ड आफ्नो सर्जिकल मास्कका पछाडीबाट डेनिस डारवेलको मुटुको धड्कनमा नजर लगाइरहेका थिए।
डारलवेलको मुटुको धड्कन सामान्य भइरहेको थियो र निकै चाँडो मुटुले लय पकड्यो । तर एउटा कुरा बदलिएको थियो।
डारवेलको मुटु अब लुइस वशकांस्कीको छातिमा धड्किरहेको थियो। यसरी संसारको पहिलो मुटु प्रत्यारोपण सफल भएको थियो।
चिकित्सा इतिहासमा यो एउटा महत्वपूर्ण क्षण थियो। यो कामका लागि दुनियाँभरीबाट बाहबाही मिल्यो र बनार्ड रातारात सेलिब्रिटी बने।
जुन ठाउँमा पहिलो मुटु प्रत्यारोपण भएको थियो, त्यहाँ अहिले एउटा संग्रहालय छ।
द हार्ट अफ केप टाउन म्युजियमका संस्थापक हेनी जुबर्ट भन्छन्– 'यो एउटा संग्रहालय मात्रै होइन, ऐतिहासिक स्थल हो।
यो म्युजियम ग्रुट शुर अस्पतालभित्रै बनेको छ। यो अस्पताल के पटाउनको सवैभन्दा ठूलो अस्पतालमा एक हो।
ऐतिहासिक सम्पदा हुनुका साथसाथै यो धेरै व्यस्त अस्पताल हो र केप टाउन युनिभर्सिटीका चिकित्साका विद्यार्थीको पढाइको केन्द्र हो।
बर्नार्ड र उनको हृदय प्रत्यारोपणले जुबर्टलाइ निकै प्रभावित गरेको छ। उनका पिता र बर्नार्डले केप टाउन यूनिभर्सिटीमा सँगै अध्ययन गरेका थिए र मिल्ने साथी थिए।
बर्नार्ड सर्जरीको दुनियाँमा पुग्नुपहिले दुवै डाक्टर सानो सहरमा सेरेसमा सामान्य चिकित्सकीय अभ्यास गर्थे।
जुबर्टले सन् २००६ मा क्यान्सरका विषयमा रहेको आफ्नो व्यवसाय बेचे र सन् २००७ मा अप्रेसनको ४० वर्ष पूरा भएपछि संग्रहालयको सुरुवात गरेका थिए।
जुबर्टले यसमा आफ्नो ८० लाख रेन्ड ( करिब ४ लाख ४० हजार पाउन्ड) लगाएका छन्। पुरानो अप्रेसन थिएटरलाई त्यसको पुरानै झल्को आउनेगरी फेरि बनाए।
उनले यस घटनासँग जोडिएका यादहरु सम्झाउन थिएटरसँग जोडिएका सामान एककृत गरे।
यस संग्रहालयमा में बर्नार्डको सफलता दुनियाँभर भइरहेका मेडिकल रिसरचे र उक्त समयको होडबाजी समेत देखाइएको छ।
इतिहासमा नाम दर्ज गराउने कोशिस एक्लै बर्नार्डले गरेका थिएनन्। अमेरिकामा सन् १९५० र १९६०को दशकमा डा रिचर्ड र डा नमर्न सुम्वले कुकुरको मुटु प्रत्यारोपण सफल तुल्याएका थिए।
बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीकामा 'रोगी' कुकुरमाथि रिसर्च गरिरहेका थिए र आफ्नो तरिका प्रयोग गरिरहेका थिए।
बर्नार्डको परीक्षण रंगभेदको चरम समयमा भइरहेको थियो। तर उनको ऐतिहासिक प्रत्यारोपण सफल बनाउन दक्षिण अफ्रिका अश्वेत र मिश्रित नस्ल भएका सहयोगीको उत्तिकै योगदान रह्यो।
हेमिल्टन नाकी नामका मान्छे जो पहले अस्पताल सफाईकर्मी थिए। उनी प्रगति गरेर डाक्टर बनार्डको प्रत्यारोपण टिकका महत्वपूर्ण सदस्य बने।
कति अर्थमा दक्षिण अफ्रिका यस्तो चिकित्सकीय सफलताका लागि असामान्य ठाउँ सन् १९६७ मा रंगभेदको कारण यो देशदुनियाँबाट अलग थियो।
बर्नार्डको सफलता मृत्युको कानूनी व्याख्याकै क्रममा सम्भव भयो। दक्षिण अफ्रिकामा डाक्टर बिरामीको मृत्यु घोषणा गरेर उसको अंगदानको तयारी गर्न सक्थे तर अमेरिकामा मुटुको गति रोकिएपछि मात्रै बिरामीको मृत्यु भएको मानिन्थ्यो।
सुम्बेले यस परिभाषाको मजाक उडाएका थिए। र १९६८ मे मा आफ्नो पहिलो तर संसारको १६ औं पछि मात्रै डा लोअरमाथि हत्याको मुद्दा चलेको थियो।
डोनर ब्रुस टकरका परिवार पत्ता नलाग्दै डा लोअरले अप्रेसनका लागि उसको मुटु निकालिसकेका थिए।
टकरका परिवारलाई थाहा भएपछि उनीहरुले मुद्दा हालिदिए। १९७२मा डा लोअरलाई आरोपमुक्त गरियो। यसपछि अमेरिकामा मृत्युको कानूनी परिभाषा बदलियो।
संग्रहालयको सवैभन्दा लोकप्रिय ठाउँ ख्याति प्राप्त गर्न जुटेका शेधकर्ता र सर्जनको होइन, डेनिस डारबेलको बेडरुम हो।
२५ वर्षका यी बैंक क्लर्कको नाम नजानिदो तरिकाले इतिहासमा दर्ज भएको थियो।
सन् १९६७ डिसेम्बर २ का दिन ग्रुट सुर अस्पतालको नजिकै मुख्य सडकमा डेनिस र उनकी आमालाई एक कारले ठक्कर दिएको थियो।
दुर्घटनामा डेनिसकी आमा मार्टको तुरुन्तै मृत्यु भएको थियो। डेनिसको दिमागमा चोट लाग्यो र केही घन्टामै मृत्यु भयो।
म्युजियमा डारबेलको बेडरुमको ढोका उनका परिवारबाट प्राप्त चिजबिजले सजाइएको छ।यसमा उनको डायरीको स्केच र सानो बाइबल छ।
ढोकामा उनका पिताका भनाइ टांगिएका छन्। श्रीमती र छोरालाई गुमाएको केही घन्टामै डेनिसका पितासँग उनका छोराको मुटु एक बिरामीमा प्रत्यारोपण गर्ने अनुमति मागिएको थियो।
उनकै शब्दमा छ, 'ठीक छ डाक्टर, यदि तपाईं मेरो छोरालाई बचाउनुसक्नुहुन्न भने अर्कोलाई बचाउने कोशिस गर्नुहोस्।' उक्त बिरामी लुइस वशकांस्की थिए। उनको मुछु विस्तारै बन्दै हुँदै गइरहेको थियो। उनको बाँच्ने सम्भावना लगभग सकिन लागको थियो।
बर्नार्ड सहमत थिएनन्। यी युवा सर्जनको महत्वाकांक्षा उनको अफिस कोठामा सजिलै देखिन्छ।
उनको कोठाको ढोकामा उनको सफलताको यात्रा लेखिएको छ। अर्ध मरुभूमि सहर ब्युफोर्टदेखि उनको अमेरिकासम्मको कुरा उल्लेख छ।
२६ मिनेटको एक डक्युमेन्ट्रीमा पनि बर्नार्डका कति रहस्य भेटिन्छन्। एक होनहार सर्जन, तर एक यस्तो व्यक्ति जसले आफ्नो पूरै करियरमा बिबाद जन्माए।
म्युजियमको मुख्य ठाउँमा अप्रेसन थिएटर छ । जहाँ ऐतिहासिक प्रत्यारोपण भएको थियो।
जुबर्टलाई अप्रेसन भएको रात थिएटरमा राखिएका सवै उपकरणको सिरियल नम्बर प्राप्त भयो। तर ती उपकरणलाई त्यहीँ ल्याउन सजिलो थिएन।
थिएटर टूबी को अपरेसन टेबल जहाँ डारवेल पल्टिएकी थिइन्। त्यसलाई नामीबियाको राजधानी विंडहन्कको रोमन क्याथोलिक अस्पताललाई दान गरिएको थियो।
जुबर्ट भन्छन्, 'मैले उक्त अस्पतालका प्रमुखलाई फोन गरें। उनलाई उक्त बेड केपटाउन लैजाने बताए।'
जुबर्टले उक्त अस्पताललाई नयाँ बेड दिए र असली फिर्ता ल्याए।
थिएटरका लाइट पनि बेचिएका थिए। एक स्थानीय पशु अस्पतालमा खोज्दा ती भेटिए।
थिएटर २एका असली हार्ट-लङ मेसिन जसको सहारमा वशकांस्की जिउँदा थिए, एक कुनामा थन्काइएको थियो। रगतको कमी नाप्ने मेसिन अस्पतालकै स्टोरमा पाए ।
यहाँ इतिहास लेखिएको छ
अपरेसन थिएटर बाहिरको करिडोरमा दुनियाँभरिबाट आएका टेलिग्राम र चिठ्ठी राखिएका छन्। शुम्बेले बर्नार्डलाई बधाई सन्देश दिएका थिए। अपरेसनपछि बिरामीको देखभालका विषयमा नमागेको सल्लाह समेत दिएका थिए।
तर सवै यो उपलब्धिको तारिफ गरिरहेका थिएनन्। शिकागोकी मेरी पावर स्लेटरीले बर्नार्डलाई ग्रुट शुर अस्पतालका कसाइ' लेखिएको थियो। एस. पेश्चेल नामकले उनको टिमलाई पिशाचको झुन्ड सम्बोधन गरेका छन्।
थिएटर टूबीको ढोकामा फिट गरेको सिसाभित्र काँचका दुवै क्युब छन्।
बायाँतर्फ फर्मल्डिहाइडभित्र लुइस वशकांस्कीको बिरामी मुटु राखिएको छ।
दायाँतर्फ डेनिस डारवेलको मुटु छ। जसले डाक्टर बर्नार्डको नाम विश्वभर फैलाएको थियो।
वशकांस्की प्रत्यारोपणपछि जम्मा १८ दिन जिउँदो रहे। दोहोरो निमोनियाका कारण उनकी मृत्यु भएको थियो।
पैदल हिँडिरहेका डाक्टर कुट्ने ट्राफिक प्रहरी निलम्बित
१०० रूपैयाँमै मिर्गौला परीक्षण गर्ने किड्नी केयरलाई महिला लघुवित्तद्वारा पाँच लाख सहयोग
सुनौलो परिवार नेपाल मेरी स्टोप सर्भिसेजको स्टोरमा आगलागी हुँदा करिब पाँच करोडको क्षति
कार्डियाक सर्जन डा ज्योतिन्द्र, जसले गरे आठ दिनको शिशुदेखि ८५ वर्षीय वृद्धसम्मको शल्यक्रिया डा शर्मा कार्डियाक सर्जन हुन्। शहिद गंगालाल हृदय केन्द्रका पूर्व निर्देशक समेत रहेका डा शर्माले हालसम्म पाँच हजारभन्दा बढी बिरामीको मुटुको शल्यक्रिया गरिसकेका छन्। शनिबार, जेठ २८, २०७९
बुढो सरुवा रोग अस्पतालले पाएन सरकारको टेको अस्पतालको इमर्जेन्सीमा बिरामीको उपचारमा एकरुपता ल्याउन स्ट्यान्टर्ड ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल बनाउने, एमआरआई सेवा सुरु गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई केन्द्रित गरी होलबडी प्याकेज सुरु गर्ने उनको योजना छ। शुक्रबार, वैशाख २३, २०७९
पिल्सको जथाभावी प्रयोगले जोखिममा किशोरीः ब्लिडिङ डिसअर्डरदेखि बाँझोपनको समस्या आकस्मिक गर्भनिरोधक पिल्सले किशोरीहरुमा ओभुलेसन हुने प्रक्रियामा असर गरी हर्मोनल गडबडी गराउँछ। साथै पछि गएर बाँझोपनको समस्या देखिनुका साथै रगत बगीरहने जस्ता ब्लिडिङ डिसअर्डरको समस्या आउन सक्ने उनले बताइन्। बिहीबार, वैशाख २२, २०७९
पैदल हिँडिरहेका डाक्टर कुट्ने ट्राफिक प्रहरी निलम्बित २ घण्टा पहिले
१०० रूपैयाँमै मिर्गौला परीक्षण गर्ने किड्नी केयरलाई महिला लघुवित्तद्वारा पाँच लाख सहयोग ३ घण्टा पहिले
सुनौलो परिवार नेपाल मेरी स्टोप सर्भिसेजको स्टोरमा आगलागी हुँदा करिब पाँच करोडको क्षति ३ घण्टा पहिले
लुम्बिनीकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमला वलीद्वारा राजीनामा ३ घण्टा पहिले
त्रिवि शिक्षण अस्पतालले फिर्ता लियो निर्णय, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने ४ घण्टा पहिले
ट्राफिक प्रहरीद्वारा डा घिसिङलाई कुटपिट गरिएको घटनाप्रति चिकित्सक संघको ध्यानाकर्षण ५ घण्टा पहिले
भेरी अस्पतालबाट पाँच बिचौलिया पक्राउ ५ घण्टा पहिले
यस्ता छन् दही-चिउराका फाइदा ८ घण्टा पहिले
न्युट्रास्युटिकल्स औषधि स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गर्ने अनुमति दिन औषधि उत्पादक संघको माग २३ घण्टा पहिले
वीपी प्रतिष्ठानले पनि असार २० गतेबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगित गर्ने मंगलबार, असार १४, २०७९
उपत्यकाका चार ठाउँको पानीमा हैजाको जीवाणुसोमबार, असार १३, २०७९
पेटमा अड्किएको चम्चा नर्भिकका चिकित्सकले बिना शल्यक्रिया निकाले सोमबार, असार १३, २०७९
धेरै रिस उठ्छ? यी पाँच खानेकुरा खानुस् शनिबार, असार ११, २०७९
सिभिलले २२ करोडमा किनेको एउटै गुणस्तर र उही कम्पनीको एमआरआई प्रादेशिक अस्पतालले २९ करोडमा किन्दै आइतबार, असार १२, २०७९
सांसदको माग: स्टाफ नर्स र अनमीलाई एउटै दर्जामा राखेर सेवा, सुविधा दिने व्यवस्था गरौं बिहीबार, असार ९, २०७९
डिप्रेसनको उपचार सम्भव छ: करुणा कुँवर [भिडियो] शनिबार, असार ११, २०७९
कुनै पनि बिरामीलाई रिफर गर्न नपरोस्: डा प्रियंका शर्मा कमला गुरुङ
‘काउन्सिलमाथि लगाइएको आरोप संसदको रेकर्डबाट हटाउन पत्र पठाउँछौं' स्वास्थ्यखबर
'बिलिङ र ल्याब रिपोर्टमात्र इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड सिस्टम होइन' स्वास्थ्यखबर
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्यको सवाल छायाँमा परेका थिए: डा रविन्द्र बास्कोटा कमला गुरुङ
‘स्वास्थ्यमन्त्रीका रुपमा काम गर्दा फस्ट डिभिजन ल्याएँ जस्तो लाग्छ’ (अन्तर्वार्ता) रिता लम्साल
कोभिड महामारीपछिको नेपाली औषधि बजार: चुनौती र अवसर (अन्तर्क्रिया) स्वास्थ्यखबर
डा पुनसँग भिडियो वार्ताः मंकीपक्स भाइरस नेपाल भित्रिने जोखिम कति? रिता लम्साल
बालबालिकाको स्याहारदेखि स्वास्थ्य पूर्वाधारसम्म यथेष्ठ लगानी गर्न आवश्यक छ: प्राध्यापक रब मुडी [भिडियो वार्ता] स्वास्थ्यखबर
स्वास्थ्य बीमा: प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नागरिक र सरकारको उत्तिकै जिम्मेवारी मंगलबार, असार १४, २०७९
स्वास्थ्य बीमा र स्वास्थ्य संस्थाको भूमिका सोमबार, असार ६, २०७९
प्रयोगशालाको माइक्रोस्कोपबाट हेर्दा : साधारण मानिसले नबुझेका असाधारण शब्दहरु बिहीबार, असार २, २०७९
रक्तदान गर्न जानुअघि र दान गरिसकेपछि के कुरामा ध्यान दिने? मंगलबार, जेठ ३१, २०७९
स्थानीय तहको स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको लागि सुझावहरु सोमबार, जेठ ३०, २०७९
स्वास्थ्यका एजेण्डा चुनावी घोषणापत्रमै सीमित नराख सोमबार, जेठ ३०, २०७९
स्वास्थ्य बीमा: सेवा, सुविधा, चुनौती र समाधान आइतबार, जेठ २९, २०७९
यस कारण स्वास्थ्य बीमा अपरिहार्य मंगलबार, जेठ २४, २०७९
स्वास्थ्य बीमा: कसरी लिने सेवा सुविधा वशिष्ठ तिवारी
स्नातकमा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन र खर्चिलो इन्टर्नसिप सुरज पराजुली
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई बधाई डा बद्री रिजाल
स्वास्थ्य बीमा: नागरिकलाई राज्यले दिएको एक वरदान वशिष्ठ तिवारी
महिलाले आफ्नो शरीरमा हुने क्यान्सरलाई कसरी पहिचान गर्ने? ज्ञान चतुर्वेदी
मिर्गौला प्रत्यारोपण र ‘क्याडाभेरीक किड्नी डोनेसन' कपिल खनाल र विकास मिश्र
एक पीडित एचएको प्रश्न: चिकित्सा शिक्षा आयोगको विभेद कहिलेसम्म? विरेन्द्र कुमार चौधरी
मेडिकल कलेजमा प्यासेन्ट सेफ्टी किन लागू गर्ने? मोली सिगल
दिउँसो सुत्ने बानी: फाइदा कि बेफाइदा?शनिबार, जेठ २१, २०७९
बच्चालाई गाईको दूध सेवन: भ्रम र यथार्थ सोमबार, जेठ २३, २०७९
हुक्का सेवनको भ्रम र वास्तविकता सोमबार, जेठ ३०, २०७९
शरीर दुख्ने तर कारण नभेटिने स्वास्थ्य समस्याः सोमाटिक सिम्प्टोम डिसअर्डर सोमबार, जेठ १६, २०७९
खोप लगाउन धेरै पटक भनें, मान्नु भएन र अन्तमा रेबिज देखियो! आइतबार, जेठ १५, २०७९
सर्पले डस्यो? यी ५ गल्तीहरु नगरौं! सोमबार, जेठ २३, २०७९
© स्वास्थ्य खबरपत्रिका. -2022 All rights reserved. Site by: SoftNEP